Ifayibha Laser Ukusika Umatshini-iGolden Laser
Ifayibha laser ukusika umatshini yinto efikelelekayo, ekulula ukuyisebenzisa, kunye nezixhobo ezisetyenziselwa ukusika ngesantya esiphezulu ukusika iipleyiti zesinyithi kunye nemibhobho. Inokukunceda ukuba uqale into entsha yokuqalisa okanye yonyuse inzuzo yenkampani esekwe kakuhle.
Ifayibha laser ukusika umatshini wethu kufanelekile ukusika ikhabhoni yentsimbi, intsimbi engenasici, intsimbi yesinyithi, intsimbi yasentwasahlobo, ialuminiyam, ubhedu, ubhedu, isinyithi, njl njl. imibhobho, iimoto, izixhobo zokuqina, ezolimo kunye noomatshini bamahlathi, oomatshini bokutya, intengiso, iikhabhathi zombane, iilifti kunye namanye amashishini.
Umzekelo No .: P1260A
Ubuncinane Ubungakanani Tube Fibre Laser Ukusika Umatshini
Ubuncinane ubungakanani umbhobho ifayibha laser ukusika umatshini P1260A, kunye okukhethekile inkqubo feeder auto kunye. Gxila ukusika ityhubhu yesayizi encinci.
Umzekelo No .: P120
Umjikelo weTyhubhu yeFibre Laser yokusika
I-P120 ngumatshini okhethekileyo wokusika wefayibha ityhubhu ejikelezayo (umbhobho ojikelezayo). Kuyilelwe ngokukodwa ukubuyisela umatshini sawing kwicandelo leemoto icandelo, umbhobho kufanelekile ishishini, njl
Umzekelo No .: P2060A / P3080A
Oluzenzekelayo Bundle Loader Ifayibha Laser Pipe Ukucanda Matshini
Ukusebenza High ityhubhu laser ukusika umatshini kunye ekulayisheni oluzenzekelayo nokothula. Ukusika ngeenxa zonke, uxande, isikwere kunye nezinye iiprofayili zetyhubhu ukwanelisa uluhlu lweemfuno zokusika ityhubhu.
Umzekelo No .: P2060 / P3080
Lo matshini wokusika ityhubhu esizenzekelayo uxhotyiswa ngesixhobo sokulayisha kunye nendawo ebiyelweyo ukuvelisa iindawo ezikumgangatho ophezulu ngeendlela ezahlukeneyo kunye nobukhulu.
Umzekelo No .: I-GF-1530T / GF-1540T / GF-1560T
Isinyithi Amaphepha kunye neTyhubhu yeFibre Laser yokusika umatshini
Uyilo oluhlanganisiweyo lubonelela ngemisebenzi yokusika kabini kwiphepha lesinyithi kunye netyhubhu. Laser amandla 1KW ~ 3KW, indawo Cutting 1.5 × 3m, 1.5 × 4m, 1.5 × 6m, Tube ubude 3m, 4m, 6m, -20-200mm
Umzekelo No .: GF-1530JHT / GF-1560JHT / GF-2040JHT / GF-2060JHT
Umbhobho oValiweyo oGcweleyo weFibre Laser Pipe kunye noMatshini wokuSika uMatshini weSinyithi
Ukusebenza komatshini wokusika wefayibha ephezulu ene-inshorensi efakwe ngokupheleleyo, itafile yotshintshiselwano kunye nokusika ityhubhu. Amacwecwe esinyithi kunye nemibhobho zinokunqunyulwa kumatshini omnye.
Umzekelo No .: P2080
I-Tube I-Laser Ukusika Umatshini P2080
Ingakumbi laser ukusika ityhubhu yentsimbi ngeenxa zonke, isikwere, okoxande, unxantathu, okweqanda, ityhubhu esinqeni kunye nezinye ezimilise ityhubhu & umbhobho. Ityhubhu enobubanzi obungaphandle bunokuba yi-20-200mm, ubude be-8m.
Umzekelo No .: I-GF-2560JH / GF-2580JH
6000W 8000W Fibre Laser Ukusika Umatshini
Amandla High kunye ifomati enkulu ifayibha laser mgawuli. BECKHOFF CNC isilawuli. Indawo yokusika eyi-2.5m × 6m, 2.5m × 8m. Ubukhulu ukusika ubukhulu 30mm CS, 16mm SS
Umzekelo No .: EA-1530JH
I-Laser yokuSika i-Laser yokuSika umatshini oPheleleyo kunye nokutshintsha kwePallet
Ifayibha laser ukusika umatshini kunye neetafile zotshintsho. Uyilo olubiyelweyo. IPG / nLIGHT 2000W ifayibha laser wenkunkuma. Sika ubuninzi bentsimbi engenasici eyi-8mm, 1 ...